Ogeysiis Mutmarkii Islaamiga Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Holland iyo nawaaxigeeda oo bilaaban doona | WELOME AL-BADAR CHANNEL YOUTUBE
← Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kitaabka Muntaqal Akhbaar
Muxaadaro Hishiiskii Xudeybiya Qeetaba 1 & 2 Sheekh Maxmed Cabdi Umal →
Ogeysiis Mutmarkii Islaamiga Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Holland iyo nawaaxigeeda oo bilaaban doona
Dhamaan bahweynta Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Soomaali yeed ee kheyrka jecel ee ku nool wadamada Yurub. Waxaanu idinku casuumey naa idinkuguna bishaareyneynaa in la qabanayo Mutamarkii sanadlaha ahaa ee xiliga Gu.ga uu qaban jiray Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Nederland.
Mutamarkan oo ah Mutamarkii 4aad ayaa la qabanayaa Maalinta Arbacada 4/05/11 may wuxuuna soconayaa Illaa Maalinta axada 8/05/11 may Insha Allaah.
Hoos ka daawo ogeysiiska Shirka
nsha Allaah Mutamarka sanadkan waxaa lagu dari doonaa programs cusub oo dhalinyarada iyo ducadaada u gaar ah iyo kuwo furan oo dadweynuhu ka qeyb qaadan doonaan gaar ahaan in caruurta loo sameeyay meel ay ku ciyaari karaan inta waalidkooda uu dhageesanayo muxaadaroyinka ama mutamarka iyo waxaana ka mid ah dowrooyin iyo kutub culimadu ay ka jeedin doonaan goobta shirku ka dhacayo Insha Allaah.
Waxaan Idinka codsaneynaa inaad kasoo qeyb gashaan Insha Allaah, sidoo kale walaalaha sharafta leh iyo dhamaan marti sharafta ka imaanaya dibadda magaalada holland waxaan ka codsaneynaa iney soo qaataan hu’ gooda.
Goobta:VON SUPPESTRAAT 20
Culimada ka soo qayb galaysa shirka
1. Sh Maxamed Cabdi Umal (Kenya)
2.Dr. Axmed Daahir Aweys (UK)
3.Sh Saciid Raage (Canada)
4.Sh suldaan gasle
5.Sh cabdubaasid sh axmed
ama Abuu khadiija Tel: 0614876382
Sidoo kale hoyga barashada Diinta islaamak ee fatxusalaam waxay isku deyey saa haduu alle idmo in live ahaan loogala socdo mutamarka Qadka Interneedka gaar ahaan websidada
http://www.fatxusalaam.tk/ ama http://www.dawah-tv.com/ iyo shabakooyin kale oo islaami ah hadii alle idmo
By Maktabada fatxusalaam